China Scaffolding Castings, forging, nohitsakitsahiko ny pabrikan'ny orinasa sy ny mpanamboatra | Metaly sy teknika
Izahay dia mpanamboatra matihanina sy mpamatsy ny sehatry ny scaffold ary koa orinasam-panondranana miaraka amina fanandramana, fanariana, totohondry, fananganana mangatsiaka ary tsipika fitsaboana ambony toy ny galvanisation mafana, plating zinc ary firakotra vovoka sns… ..
Izahay dia namokatra sy nanondrana Scaffolding casting, forging ary nohitsakitsahana vokatra ho an'ny tsena any Eropa sy Amerika Avaratra nandritra ny 20 taona mahery. Manana injeniera matihanina sy za-draharaha izahay afaka manome ny vokatra ampanjifaina isaky ny sary sy santionany
Famafazana vy: 60-45-12,60-40-18, fanariana vy: ASTM A27 Gr 70-40
Fandefasana: Q235, Q345
Faran'ny ledger, Nut na Nut + tantanana, Rosette na Rosette Bolt Coupler, Coupling (Lehilahy sy Vehivavy), Wedge (Pin), Claw, Tube Lock, Handle, Nast Collar Nut, Top Cup, Base Jack （Adjustable / na Swivel Base Jack） , Caster, sns… ..,
* Jacky Base azo ovaina / na Swivel: ny jack scaffolding no fototry ny fananganana scaffold. Ny haavony dia azo ahitsy mba hifanaraka amin'ny tany tsy mitovy amin'ny toerana fananganana. Ny jack base swivel dia azo soratana mba hifanaraka amin'ny faritra misavoana sy ny toetoetran'ny tany, mitazona ny haavon'ny scaffold iray manontolo. Ny jack jack base dia milentika mafana na elektrika.
Scaffolding casting, forging and stamping accessories vokatra ampiasaina ho singa ao amin'ny Scaffold Ringlock System, Scaffold Cuplock System, Scaffold Frame System, Scaffold Tube & Clamp System amin'ny sehatry ny scaffolding Industrial, tranobe, scaffoldade facade, rafitra fanohanana ary Sidewalk Bridge System, Formwork Rafitra, Rafitra Scaffold modular, sns …….
Serivisy OEM sy ODM atolotra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Nahazo laza tsara izahay miaraka amin'ny asa injeniera matihanina / tsara ary mifehy ny kalitao / sy amin'ny fandefasana fotoana. Ny tanjonay dia ny hanangana fifandraisana mandresy fandresena amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny famatsiana ireo vokatra avo lenta arakaraka ny sary sy ny takian'ny mpanjifa miaraka amin'ny vidiny mirary.
Aza misalasala mifandray aminay amin'ny fangatahana rehetra!
Previous: Casting amin'ny habe lehibe